I Love Music — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Wonke ngoku ndize ndiye umva uze umamele albums neengoma eyabangela ukuba ngokwenene ngobugcisa ngokomoya xa khendeva. Omnye wabo Albums Le Projekthi Solus UChristus yi Shai Us. Ngomnye albums zam hop hip osithandayo- ixesha. Ukuveliswa iyodwa (nangona commerical), umxholo Iyamangalisa, kunye nobuchule Shai ngayo lyrical iboniswe ngokupheleleyo. Le yenye yezo albums eyenza Rappers azibuza, "Kutheni ndi sa kuREPHA kwakhona?”
Andikwazi azicaphule yonke irekhodi esi sithuba, kodwa nantsi enye isingise awuthandayo album. Yinto ivesi shai ukususela "Mika Khangela 1,2″:
Wanikela ngobomi bakhe, bube yintlawulelo, Mna abaculi ndiya ukudanisa
Xa becengceleza imihobe zam kaKristu, iMvana amalungisa izibane lantern yam
Ngubani omnye kodwa iNkosi yeentlanga
Ngaba bebabaza njengenxila leentlanga babhale ngaphandle omnye ilizwi self-kukuzukiswa?
amazwi am abatyhafileyo- azanelanga ngokwenene ukuchaza iMbewu Nasono
Umiselwe ukwenza izenzo ngokungummangaliso
Xa ndandineminyaka elishumi, ukuba iintloko mdala kumangaliswa iimbono zakhe
Wabathobela abazali bakhe, nangona Wadala imibhobho umoya wabo
A mgaqweni oyinyaniso- ngubani na sicamngca
Umkhonzi ekulweni inyoka entlango neyama ukusuka IDuteronomi
USathana waziphosa zonke imiqo- kuye, kodwa akaba nako ukubuqonda
I stratagems ibalaseleyo Adam yoluntu
Yokukhetheka wobulali yakhe inzulu kakhulu ukuthetha
Kwaye ukuba ucinga ninobulali ithambile nje zama ukuba abalulamileyo iveki
abantu abafezekileyo- ukanti Ndandivuya ubuthixo
Ukuzalisekisa umnqophiso ongunaphakade phakathi Emnye
ukubandezeleka ndityiwa, nentlungu engenasiphelo
ulahliwe aNgcwele ngunobangela Inventor womxhuzulane
Akukho sono bakhe enobungangamsha, Yena abingelele
Isiqhamo uthando yakhe ngokwaneleyo nelokukha isono kwiingcambu
Ngomhla wesithathu wavuka noloyiso- imbali ntsingiselo
A umdlalo ukuba eyalela kaThixo ukwenza uYesu khangela elizukileyo
Thina bamtshicela intetho engcwele phezu ibetha aluhlaza lobushushu
Kwaye akukho kokurhoxa Nangona ukubuya yoMlawuli sifuna!
ukuba, abahlobo bam, yenye kwezi vesi inkulu hip hop wakha ebhaliweyo. Izikimu imvano, isigama, ekwenzeni nobunzulu umxholo, ukuhamba- sonke uphambene. Mdumise uThixo usebenzisa umzalwana wam Shai. Ziziphi ezinye albums y'alls oyithandayo neendinyana?
Lee • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:27 mna • impendulo
ngoku, just try to visualize the most
JulianH • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:55 pm • impendulo